यो स्लट को रील सान्ता मारिया एक मेक्सिकन शहर को एउटा पृष्ठभूमि छ. नयाँ स्लट कुनै जम्मा अनलाइन त्यहाँ शहर मा सबै मानिसहरू को Tacos snatching छ जो दुष्ट कप्तान Diaz र तीन भाइ Pepe छ कि कथामा आधारित छ, Pico र पासो उहाँलाई छुटकारा प्राप्त गर्न शहर लोक मदत छन्. कप्तान Diaz पनि जेल तिनीहरूलाई राख्दछ र तिनीहरू मुक्त र उहाँबाट शहर सुरक्षित गर्न आफ्नो बुद्धि प्रयोग. यो प्रस्ताव मा सबै भन्दा राम्रो नयाँ स्लट कुनै जम्मा अनलाइन छ.
टाको भाइहरूलाई स्लट विकासकर्ता बारे
यो स्लट बीचमा छ 8 Elk स्टूडियो विकासकहरूको सिर्जनाहरू. विकासकर्ता फेरि एक सेट-अप एक फरक किसिमको यो विषय सिर्जना गरेको छ. तिनीहरूले हाल तिनीहरू देखि साथ आए ठूलो खेल को एक पाहुना संग उद्योग मा एक महत्वपूर्ण पहिचान गरेका छन् 2012.
यो नयाँ स्लट को अद्वितीय बिक्री मूल्य कुनै जम्मा अनलाइन जहाँ तीन भाइ Diaz मार्फत आफ्नो जंगली भाग्ने सुविधा को प्रक्रिया मा पैदल wilds बन्न आफ्नो मुक्त spins सुविधा छ. तपाईं पनि धेरै आकर्षक Senorita पूरा गर्ने मौका छ, who isafriend of the three brothers and helps them to escape in the feature. यो स्लट एक साथ गरेको छ त्यो भन्दा अन्य5मानक रील सेट. त्यहाँ छन् 243 लागि शिकार paylines. को रील adorning प्रतिक गितार छन्, tequila एक बोतल, एक सिउँडी रोप्नु, एक कुदाल, र एक खानी दीपक प्रतीक.
तीन भाइ को कुनै पनि एक पंक्ति को एक पाँच एक लागि कल सामना 400 रंगीन पत्र लेखिएको सिक्का win.The खेल नाम जंगली प्रतीक हो. यो बोनस प्रतीक बाहेक अन्य सबै प्रतीक प्रतिस्थापन गर्न सक्छ.
तपाईं केवल 2nd र 4th रील मा पुन: स्पिन प्रतीक हाजिर गर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाईं, तपाईँलाई नि: शुल्क पुन स्पिन दिइनेछ. Spotting3को पुन spins समयमा सुरक्षित प्रतीक लागि जंगली भागन सुविधा सक्रिय हुनेछ. त्यहाँ अनियमित एक बम विस्फोट संग प्रस्ताव छ, जो एक मुक्त गुणक छ, बोनस राउन्ड समयमा जीत को लागि. बोनस राउन्ड फरक रील मा खेलिन्छ. त्यहाँ multipliers र मुक्त को धेरै बोनस राउन्ड समयमा एउटा प्रस्ताव अप spins. The betting range begins from 10p per spin and goes up to £50 per spin in this new slots no deposit online.
पशु आवाज को सही ध्वनि को गेमप्ले सही समक्रमण छ. तपाईंले केही गधा braying र पर्दाको पछाडि chirping केही चरा सुन्न हुनेछ. यो नयाँ स्लट कुनै जम्मा अनलाइन कार्टून-जस्तो दिइएको र तपाईं आफ्नो पुरानो स्कूल दिन reminisce गर्नेछ जो महसुस गरिएको छ. अरु के छ त, त्यहाँ धेरै मुक्त spins र multipliers को गेमप्ले मा आफ्नो तरिका माथि आउँदै छन्.